Budata mmemme iji chepụta t-shirts | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | software
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịme akwa nke gị ma ọ bụ ịchọrọ inwe akwa nke aka gị, enwere mmemme ị ga - eji chepụta uwe elu gị.
Ọ dị mfe inweta, si ka ibudata, na ịwụnye. Na mgbakwunye, mmemme a na-enye gị ohere ịmepụta ụdị ejiji gị na ụdị 3D. Ọ bụ mmemme ị nwere ike ịhazi ụdị gị, ma ọ bụ ịgbanwe agba ntutu, etemeete, na ihe ndị ọzọ; na mgbakwunye na inwe ike ịhọrọ ụdị uwe, ụdị, agba, ụkpụrụ, wdg. Ọ bụ mmemme dị oke mkpa maka ndị ahụ chọrọ ịme T-shirts nke aka ha, ma ọ bụ nke onwe ya, nke ezinụlọ, ịre ma ọ bụ nye.
Ihe a niile na ụfọdụ ihe ndị ọzọ anyị nwere ike nweta, ekele Virtual Fashion ọkachamara, nke bu free ma bara oke uru na ikpe ndị a. Uzo ozo eji amata ihe omume a bu na odi n’ime español ya mere, ọ gaghị adị mfe nghọta karị ịghọta nke gị na-arụ ọrụ otu oge n'ime ya.
1 Ngwa ngwa ngwa
2 Mmemme maka kọmputa
3 Ibe weebụ
4 Etu esi chepụta uwe elu
5 Ego ole ka ọ na-eri iji chepụta t-shirts?
Mepụta t-shirt bụ ihe anyị nwekwara ike ime site na ekwentị mkpanaaka anyị. Enwere ngwa ndị na-eme ka nke a kwe omume, yabụ ọ bụ nhọrọ ọzọ dị mma ịtụle, ebe ọ bụ na maka ọtụtụ ndị ọrụ ọ dị mfe ịme nke a site na ekwentị ha. Enwere nhọrọ ole na ole dị na Google Play, nke nwere ike ịmasị na nke a.
Nke mbu bu Design ma biputa t-shirt gi, nke bụ ngwa dị mfe nke anyị nwere ike iji mepụta t-shirt ka anyị masịrị anyị. Na mgbakwunye, ọ na - enye gị ohere imepụta faịlụ ma ọ bụ usoro nke enwere ike bipụta ma emechaa, nke mere na ọ na - enyere anyị aka na usoro a n'ụzọ dị ịrịba ama. Nhazi nke ngwa ahụ dị mfe ma na-arụ ọrụ nke ọma. Enwere ike ibudata ya n'efu na Google Play:
Chepụta ma bipụta uwe elu gị
N'aka nke ọzọ anyị nwere uwe T-shirt - Snaptee, nke bụ ikekwe ihe kasị mma mara na vetiran nke a na ubi. Ọ na-enye anyị ohere imepụta t-shirt omenala site na ncha. Anyị ga-enwe ike ịhọrọ ihe anyị chọrọ n'echiche a, site na agba, usoro ma ọ bụ mechaa. N'ihi ya, ịnwe ụdị nke gị dị mfe. Enwere ike ibudata ya n'efu na gam akporo:
Ekike T-uwe elu - Snaptee
Developer: Snaptee nwere oke
Mmemme maka kọmputa
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmepụta uwe elu na kọmputa gị, o nwekwara ike iji ụfọdụ mmemme. Ọrụ ha yiri nke anyị nwere na ngwa ekwentị, naanị na nke a anyị ga-eji mmemme na kọmputa. Ha na-ahapụ anyị ka anyị mezuo usoro nhazi ngwa niile, ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ t-shirt omenala 100%.
N'okwu a, nhọrọ ahụ sara mbara, ọ bụ ezie na enwere mmemme nke nwere nnukwu mmasị, ihe bu Desktọpụ T-Shirt Onye Okike. Ihe omume a ga - enyere anyi aka imepụta t-shirt nke anyi di nfe na komputa. Anyị nwere ike ịhazi ihe niile gbasara imewe, ruo mgbe anyị nwetara nke anyị chọrọ. Mfe iji na ezigbo nhọrọ iji tụlee.
Nke a bụ nhọrọ nke toro ọtụtụ oge. Anyị zutere ọtụtụ ibe weebụ iji mepụta atụmatụ nke ejiji t-uwe zuru ezu. Naanị mee ọchụchọ Google iji hụ na enwere ọtụtụ nhọrọ dị na nke a. Na mgbakwunye, ọrụ dị na ha bụ otu, yabụ na anyị agaghị enwe ọtụtụ nsogbu n'akụkụ a.
Otu n'ime ewu ewu bụ Teespring, Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ na njikọ a?. Na ibe a anyị ga-enwe ike ịmepụta ụdị anyị chọrọ, ịhọrọ n'etiti ụdị t-shirt dị iche iche, na-eke agba anyị chọrọ iji yana ederede anyị chọrọ itinye na ya. Ihe a niile na-enye ohere imewe ahaziri nke 100%. Na mgbakwunye, dabere na mgbakwunye anyị gbakwunye, anyị nwere ike ịhụ ọnụahịa nke kwuru uwe elu ga-efu.
T-uwe ojii, na njikọ a dị, bụ nhọrọ ọzọ ị ga-atụle na mpaghara ahịa a. Ọ na-enye anyị ohere ịmepụta t-shirts ka ihe masịrị anyị. Ọ bụ ezigbo weebụsaịtị ma ọ bụrụ na anyị bu n'obi ịmepụta ọtụtụ nkeji, dika enwere ike ikpe ma ọ bụrụ na ọ bụ maka otu ihe omume, dịka ọmụmaatụ. Kensinammuo iji na ezi ahịa n'ozuzu.
Spreadshirt bụ weebụsaịtị nke atọ anyị kpọtụrụ aha, nke bụ nhọrọ ọzọ dị mma ịtụle. Ọ ga-enye anyị ohere ịmepụta atụmatụ anyị chọrọ na t-shirts. Na mgbakwunye, ọ bụ weebụsaịtị dị mfe iji, nwee ike ịmepụta t-shirts maka ụdị mmadụ niile (okenye ma ọ bụ ụmụaka). Anyị nwekwara ike ịhọrọ ihe niile gbasara uwe elu ahụ, dịka ihe. Ọbụna enyere ya ohere ịmepụta t-shirt obibi, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Akwa nhọrọ, na ị nwere ike ịga ebe a.
Etu esi chepụta uwe elu
Usoro a na-abụkarị otu na ibe weebụ niile. Anyị ga-eme buru ụzọ họrọ akụkụ ụfọdụ, dị ka ihe anyị chọrọ iji na uwe elu na agba ya. Ya mere na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịhọrọ nhọrọ achọrọ. E nwere ụfọdụ peeji nke nwere ọtụtụ agba, mana n'ozuzu ọ naghị abụkarị nsogbu.
Ihe nkịtị bụ na a na-ahapụ ya mgbe niile ka ọ mepụta ederede ahaziri iche, gụnyere ohere ịhọrọ font. Anyị nwekwara ike iwebata foto ma ọ bụ akara ngosi na ya, nke n'ọtụtụ ọnọdụ anyị ga-ebugo site na kọmpụta ahụ, yabụ ọ dị mkpa ịnwe faịlụ echekwara nke anyị chọrọ iji n'okwu a. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime peeji ma ọ bụ mmemme nwekwara ihe ndị anyị nwere ike iji, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepe ụdị. Ihe a na-emebu bụ na ị ga-akwụ ụgwọ ego ole anyị ji arụ ọrụ.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike hazi imewe nke uwe elu a na-amasị anyị mgbe niile. Ozugbo emechara anyị, naanị anyị ga-ahọrọ nha na nkeji anyị chọrọ site na uwe elu a, ma si otú a anyị ga-amata ọnụahịa nke usoro omenala a ga-efu. Ọtụtụ peeji na - eme ka ọnụ ahịa belata ma ọ bụrụ na enyere iwu karịa.
Ego ole ka ọ na-eri iji chepụta t-shirts?
Mepụta t-shirts adịghị ọnụ. Ọtụtụ peeji na-agagharị n'otu akụkụ, nke dị n'etiti euro 10 na 20. Agbanyeghị na ọ dabere n'ọtụtụ ihe, nke ga-abụ ọnụahịa ikpeazụ nke uwe elu a kwuru. N'aka nke aka, ihe ndi anyi ji eme ihe bu ezie, ebe obu na ufodu kariri onu ahia karie, karia ma anyi tinye aka na uwe elu ebe obibi, dika ufodu ulo ahia na enye anyi.
Agba ndị ahụ nwekwara ike imetụta, ebe ọ bụ na ụfọdụ agba dị mgbagwoju anya karị imepụta ma nwee peeji ndị na-akwụ ụgwọ karịa. Mana ha anaghị abụkarị nnukwu ndịiche na nke a. Na njedebe, ihe ndị anyị ji arụ ọrụ, dị ka foto, akara ngosi, akara ngosi, wdg.. Nke a pụtara na ọnụahịa nke uwe elu a kwuru nwere ike ịdị elu. Pagesfọdụ peeji na-akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla, ebe ndị ọzọ na-ana anyị otu ugboro. Onye ọ bụla nwere usoro nke ya.
Ihe ndị a bụ akụkụ na-enye aka na ọnụahịa ya, mana anaghị eme ka ọ dị oke ọnụ. Ingmepụta t-shirts bụ ihe dị n'ime iru akpa niile. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịmepụta ihe ị na-eme, ị ga-ahụ na ọ bụ ihe dị mfe ma dịkwa ọnụ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Budata mmemme iji chepụta t-shirts
Zaghachi ka jaiko
ọma usoro ihe omume ga-eji ya. Daalụ.
ps Achọrọ m ibudata ya iji kwuo uwe elu
kedu ka m ga esi budata ya
kedu ka esi ebudata ihe omume a gwa m xfa
Kedụ ka enwere ike isi budata mmemme ahụ?
agwa nwanne dijo
Achọrọ m mmemme iji chepụta mugs nke mmemme m nwere ike iji nke na-abụghị Photoshop ma ọ bụ hofmman
Zaghachi omume nwanne
Cloudya: Igwe igwe igwe igwe kacha mma
Ndị ọrụ maka Series Yonkis mechara kwụsịchaa